Home Somali News Somalia:Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka Hadlay Weerarkii Jaamacadda Gaarisa iyo Fikirka Al-shabaab
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay weerarkii ay Al-shabaab ku qaaday Jaamacadda Gaarisa ee gobolka Waqaooyi-bari Kenya, isagoo sheegay in Al-shabaab ay tahay cadow u baahan in lala dagaalamo.
Xasan Sheekh oo u warramayay VOA-da kaddib saddex maalmood markii uu dhacay weerarkii Gaarisa ee lagu dilay 148-qof oo u badan ardaydii halkaas wax ka baranayay ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay weerarkasa.
“Runtii waa wax laga xumaado in Al-shabaab weerarto Jaamacadda Gaarisa ee Kenya; iyadoo ujeedkooda ku aadan inay dadka laba qaybood u kala saaraan oo ay kirishtaankana dilaan kuwa muslimka ahna sii daayaan waa mid ay ku doonayaan inay isaga horkeenaan shacabka dalkaas; balse qorshahaasa waa mid fashilmay maadaama ay shacabka Kenya ogaadeen ujeedadooda,” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Madaxweynaha Somalia oo la hadlay hoggaamiyeyaasha Kenya ayaa xusay inuu ku boorriyay inay mideeyaan shacabkooda kana hortagaan Al-shabaab. Xasan Sheekh ayaa intaas ku daray in Al-shabaab ay yihiin caadow, sidoo kalena uusana cadowgu lahayn wax sharaf ah. “Somalia waxay ku dilaan dadka Soomaaliyeed iyo madaxdooda muslimiinta ah, marka ma jirto sabab ay u sheegtaan inaysan dilayn dadka muslimka ah.
Sidoo kale, madaxweynaha Somalia ayaa gaashaanka ku dhuftay hadalkii kasoo yeeray hoggaamiyeyaasha Soomaalida – Kenya ee ahaa in xeryaha Kenya laga raro qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Dhadhaab, maadaama xeryahaasu noqdeen halka laga soo abaabulo weerarrada laga geysato Kenya.
“Way dhici kartaa in ruux ka mid ah qoxootiga uu ku biiro kooxda. Laakiinse inta badan qoxootiga ku jira xeryaha Dhadhaab waa shacab nabadda jecel oo aan wax taageero ah siin Al-shabaaba,” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Mar la weydiiyay madaxweyne Xasan su’aal la xiriirtay darbiga ay sheegtay dowladda Kenya inay ka dhisayso xuduudda u dhexeysa Somalia iyo Kenya ayuu ku jawaabay inuu warkaas ka maqlay warbaahinta, laakiinse uu isagu qabo inuusan darbi istaajin karin Al-shabaaba.
“Al-shabaab waxaa looga hor-tegi karaa oo keliya iyadoo lala dagaalamo fikirka ay kooxdu rumeysan tahay, haddii aan tallaabadaas la qaadinna xal laga gaarayo arrintooda ma jirto,” ayuu mar kale yiri Xasan Sheekh.
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkii dhawaan ka dhacay Gaarisa iyo kuwo kale oo horay uga dhacay gudaha dalkaas, iyagoo ku goodiyay inay weerarro kale ka geysan doonaan magaalooyinka Kenya.
Ugu dambeyn, madaxweynaha Somalia ayaa la weydiiyay inay Al-shabaab la hadlayaan si dhibaatada taagan loo xalliyo iyo in kale, wuxuuna sheegay in xukuumaddiisa iyo isaguna ay cafis u fidiyeen xubnaha ka tirsan kooxdaas.
“Cafiskaas waxaa ka faa’iideystay tiro dagaalyahannada iyo madaxdii kooxda ka mid ah, dowladduna si wanaagsan ayay u soo dhaweysaya. Dowladduna diyaar ayay u tahay inay la hadasho cid walba oo Al-shabaab ka tirsan oo ka tanaasulaya fikirka rabshadaha ku dhisan.